के तपाईले सपनामा सर्प देख्नुभयो ? तपाईमा अब यी चकित हुने ६ कुराको लक्षण हो - Halkhabar
Home/रोचक/के तपाईले सपनामा सर्प देख्नुभयो ? तपाईमा अब यी चकित हुने ६ कुराको लक्षण हो
एजेन्सी । हामीले सपनामा के देख्न सक्ने कसैको नियन्त्रणमा छैन । सपना एउटा यस्तो सत्य हो जुन सबैका लागि सामान्य छ र हरेक व्यक्तिले जीवनमा कहिलेकाहीं सपना अवश्य देख्छ । आज हामी कुरा गर्दैछौं सर्पको सपनाको बारेमा । हो, सपनामा सर्प देखेर डराउनु सामान्य छ । यसलाई लिएर हाम्रो समाजमा थुप्रै प्रकारका विश्वासहरू छन् । धार्मिक ग्रंथहरूमा, सर्पको सपना लिएर धेरै कुराहरू भनिएको छ।
१, यौन जीवन र सर्प:केही अध्यनहरुमा यो पनि भनिएको छ कि तपाईले सपनामा सर्प देख्नु र तपाईको यौन जीवनको निकैं नजिकैको सम्बन्ध रहेको छ । यदि सपनामा सर्प तपाईंको ओछ्यानमा देखिन्छ वा सर्पसँग जोडिएको अन्य पुरात देख्नुभयो भने त्यसको सिधै असर तपाईंको यौन ऊर्जासँग हुन्छ । साथै सपनामा सर्प देख्नाले तपाई आफ्नो यौन साथिका बारेमा धेरै कुराहरु जान्न सकनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।
२, सर्प र समृद्धि:पुरानो समयमा, सर्पलाई सद्धृदिसँग जोडेर हेर्ने गरिएको थिँयो । यस विश्वासको अनुसार, यदि तपाईंले आफ्नो सपनामा सर्प देख्नुभयो भने, तपाईंले चाँडै सफलता र पैसा पाउँदै हुनुहुन्छ । तपाईले थालेको काममा तपाई सफलताको नजिक हुनुहुनछ । यर्सथ तपाईंले सफलताको मार्गमा आउँने सबै बाधाहरु पार गर्नुभयो ।
५, सपनामा सर्पले डस्नु:यदि सपनामा तपाईलाई सर्पले डस्यो वा तपाईलाई निल्ने कोशिस गर्दैछ भने,यसको अर्थ हुन्छ तपाईंले कुनै पनि संघर्ष वा जीवनमा चलिरहेको परिस्थितिहरूलाई यथास्थितमा छोड्नु पर्छ । भविष्यमा यो स्थिति एक बोझ हुन सक्छ किनभने,यसको साथ बलियो रूपमा संलग्न हुनु तपाईको लागि बोझ भन्दा अरु केही हुँदैन ।
६, सर्प र मन पर्ने वा नपर्ने:वातावरणको अनुसार तपाईं जहाँ बस्नुहुन्छ, सपनामा सर्प आउनुको अर्थ फरक हुन सक्छ। तर सर्पको बारेमा तपाईं कसरी सोच्नुहुन्छ रु चाहे तपाईं तिनीहरूसँग डराउनु हुन्छ वा हुँदैन, तपाईंको सपना पनि यस कुरामा निर्भर गर्दछ । किनकी यदि तपाईं सर्पदेखि डराउँनुहुन्छ भने, सपनामा सर्प देखेर तपाईंको अनुभव कुनै सर्प पालेर बसेको मानिसको भन्दा फरक हुन सक्छ । यो भनिएको छ, हामी अक्सर हाम्रो सपनाहरु मा त्यहि चीजहरू देख्छौं, जसको हामी वरिपरि छौं वा त्यसका बारेमा हामी अधिक सोच्न सक्छौं।
नागदेवताको दर्शन गरि प्रेमलिला पढेमा सधै दिन राम्रो र नया जोश मिल्नेछ !
गाईले पत्ता लगाएको महादेव ! दर्शन गर्नेको भिड, दर्सन सोरुप सेयर गर्नुस